အဆိုပါပြဿနာကိုအောင်ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည် သားသမီးရဲ့မွေးနေ့တောက်ပ ဆက်ဆက်မိဘမြားစှာမှစိုးရိမ်စရာများနှင့်အမှတ်တရ။ တကယ်တော့တှငျအဘယျအပေါငျးတို့သအသက်အရွယ်သားပျင်းရပါဘူးဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းစွာသင်တန်းကဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်စွမ်းအင် drawing, သားသမီးရဲ့စုပေါင်း captivate? ဒီလိုလုပ်ဖို့တလမ်းတည်း - ကpiñataတစ်ဦးရိုးရာမက္ကဆီကန်ကစား။ Pignata သကြားလုံးနှင့်အသေးငယ်တဲ့အမှတ်တရပစ္စည်းများနှင့်ပြည့်စုံကြီးမားသောဆွန်းကစားစရာဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၏piñatasရဲ့ contents တက်ဆွဲထားခြင်းနှင့်အထူးလင်းနို့တစ်ဦး Pre-ချည်ထားသောမျက်စိတပ်များရ။ အစဉ်အလာ, အpiñataတစ်မြေအိုးထဲကနေကိုဖန်ဆင်းသည်၎င်း၏တောက်ပသောစက္ကူ obkleivaya နှင့်မည်သည့်တိရစ္ဆာန်အဖို့ပုံစံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကော်သို့မဟုတ် PVA ကော်အောင်များအတွက်ရေနှင့်မုန့်ညက်,
Nadu ပူဖောင်း။ ဘောလုံးကိုကြောင့်သေးငယ်တဲ့piñata၏, ကြီးမားတဲ့ယူသင့်ပါတယ် hit ဖို့အများကြီးပိုခက်သည်, အထဲတွင်သကြားလုံးအများကြီးလျော့နည်းတင်လိုက်တယ်။
အများအပြားအလွှာအတွက်သတင်းစာများ၏ strips တွေနဲ့ပူဖောင်းကိုချွတ်တိပ်။ အဆိုပါ strips တွေရဲ့ width3စင်တီမီတာ၏အရွယ်အစားနှင့်အရှည် 15 စင်တီမီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်သင့်ကြောင်း, crosswise ကပ်ရပါမည်။ တစ်ဦးချင်းစီသည်ယခင်အလွှာ gluing ရှေ့မှာခွောကျသှေ့ပါစေရန်သေချာစေပါ။ တံဆိပ်ခတ်ထားရန်ပူဖောင်းထုံးမလိုအပ်ပါဘူး။ အဆိုပါကော်အဖြစ်အဆင်သင့် PVA ကော်သို့မဟုတ်ဂဟေငါးပိ (2 ခွက်2ခွက်မုန့်ညက်ဆား 1 ဇွန်းထည့်သွင်း, ရေလောင်း) ယူနိုင်ပါတယ်။
စက္ကူလေးငါးအလွှာဖြစ်စေတဲ့, အခြောက်မှpiñataချွတ်အိပ်လေ၏။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုအများအားဖြင့် 12 နာရီကြာပါတယ်။
အဆိုပါ pinata လုံးဝခြောက်သွေ့သောအခါ, အလှဆင်ဖို့စတင်။ အဆိုပါမြို့ပတ်ရထားပုံသဏ္ဍာန်, မူအရ, စိတ်ကူးစိတ်သန်းများအတွက်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာတစ်အခြေခံပေးပါသည်။ ကြောင်တစ်ကောင်တစ်ယုန်တစ်ဦး mouse ကို - Piñataတောက်ပသောအရောင်အဆင်းနှင့်အတူဆေးထိုးခြင်းနှင့်စက္ကူနားရွက်ပူးတွဲထားပါတယ်, ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူပျော်စရာနည်းနည်းတိရိစ္ဆာန်သို့လှည့်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အစဉ်အလာနှင့်နီးစပ်သောpiñataပြုခြင်းနှင့်ကအပြာရောင်ဆေးထိုးခြင်းမှအဘို့ပါလိမ့်မယ်။
Piñata crepe စက္ကူ strips တွေအသစ်မွမ်းမံ။
အဆိုပါ pinata ဖြည့်ဆည်းစတင်ပါ။ ဒီအဆုံးရန်, ပူဖောင်းစိမ်းဖြင့်နှင့်လက်ဝဲဘက်အပေါက်ကနေတဆင့်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
ကတ်ကြေးနှင့်အတူအပေါက်ကယျြဝနျး (ကpiñatas decorating မီနှင့်အပြီးတစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်) ။
ကျနော်တို့piñataဆိုင်းငံ့ပါလိမ့်မည်သည့်အတွက် segment ကိုတိပ်သူတို့ကိုမှတဆင့်အပေါက်တစ်ပေါက်လာကြတယ်နှင့် prodenem သုံးပြီးတွင်းထွက်သယ်ဆောင်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ pinata ကြောင့်သာရပ်ဆိုင်းဖြစ်နေဆဲ, အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုသင့်လျော်သောအရွယ်အစားအိုးတလုံးမှသူတို့ကိုချုံ့ခြင်း, ဘေးနံရံများတစ် rounded ပုံသဏ္ဍာန်ပေးကွပါစို့။
အလားတူပင်piñataဖြည့်ပါလိမ့်မယ်အရာမှတဆင့်သေးငယ်တဲ့တံခါး, ထွက်ခွာ, မျက်နှာစာအုတ်ရိုးနားမှာကော်။
Piñataသင့်လျော်သောရုပ်ပုံ fringed အနားသို့နှင့်အလယ်ဗဟိုအရပ်၌ရှိဖြတ်ရောင်စုံစက္ကူ strips တွေ, အလှဆင်။
အခါရေယုံ၏အခြေခံပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကော်ရင်ခွင်ကိုအလှဆင်ဖို့စက္ကူ strips တွေ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ pinata အဲဒါကိုဖြည့်ပါနဲ့ဆွဲထားဖို့သာဖြစ်နေဆဲ, အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဖြည့်piñata? ဟုတ်ပါတယ်, အပေါငျးတို့သဧည့်သည်များများ၏အသက်အရွယ်နှင့်အကျိုးစီးပွားအပေါ်မူတည်ပေမယ့်တစ်ဦး Win-Win သကြားလုံး, အသေးစားလက်ဆောင် confetti နှင့် streamers နှင့်အတူကဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းအရာဖို့အရေးပါဆုံးလိုအပ်ချက် - ကကြွပ်ဆတ်ခြင်းနှင့်စိတ်ထိခိုက်မဖြစ်သင့်ပါတယ်။
မိမိတို့လက်နှင့်အတူ pompons ၏သိုးသငယ်
သစ်ခွ corrugated စက္ကူ
ခေါက်ဆွဲ carbonara - အီတလီအစားအစာ၏အရသာမူရင်းချက်ပြုတ်နည်းများ
ဆော်လမွန်၏စကားကိုနားထောငျ - စာရွက်
သားရေကုလားထိုင် - နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ကြော့ရှင်း
Ornella Muti - မိမိလူငယ်နှင့်ယခု
Irina Shayk နှင့် Bradley Cooper Malibu အတွက်ရက်စွဲတစ်ခုသွား